www.camaloow.com - News: Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyey Afgembigii dhicisoobay ee Turkiga.......................
December 10 2018 12:59:42
Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyey Afgembigii dhicisoobay ee Turkiga.......................
<?php </a> Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, waxa uu si kulul u cambaareeyey Isku-daygii Afgembi ee Jimcihii ka dhacay dalka Turkiga. Kadib, markii ay Koox ka tirsan Saraakiisha Milliteriga Turkiga isku tijaabiyaan inay carqaladeeyaan Deganaanshaha iyo Dimuqraadiyadda Turkiga.
â€œWaa wax aan la aqbali Karin in la afgembiyo Nidaamka Dimuqraadiyadda ee ay dadka Turkiga ku soo nolol qaateenâ€ ayuu yiri Madaxweynaha oo Isku-dayga Afgembiga fashilmay ku tilmaamay nasiib-xumo.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, waxa uu Dhambaal Tacsi ah u diray dhigiisa Faransiiska, Francious Hollane, wuxuuna cambaareeyey weerarkii loo adeegsaday gaariga xamuulka ee habeen hore lala beegsaday dad u dabaaldegayey Maalinta Xorriyadda Faransiiska.
Madaxweyne Xsaan Sheekh waxa uu falkaasi ku tilmaamy mid Argagixiso oo ka dhan ah Aadminimadda.
· salaad on July 16 2016 · 0 Comments · 47126 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,909,175 unique visits